Dowladda Somalia ayaa soo dhaweysay heshiiska dowladaha Sacuudiga iyo Qatar ay gaareen… – Hagaag.com
Dowladda Somalia ayaa soo dhaweysay heshiiska dowladaha Sacuudiga iyo Qatar ay gaareen…
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay heshiiska horudhac ah ee laga gaaray khilaafkii soo jiitamayay ku dhawaad saddaxdii sano ugu danbeysay ee u dhaxeeyay wadamada Khaliijka intooda badan oo dhinac ah iyo dowladda Qatar.
Gaar ahaan waxaa soo dhaweysay dowladda Soomaaliya hehiiska dowladdaha Sacuudiga iyo Qatar oo ku dhawaaqay in ay isku fureen dhamaanba isku socodkii labada dhinac oo muddo dheerba xirnaa.
War ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa looga mahad celiyay dowladda Kuwait gaar ahaan Wasaarradda Arrimaha dibadda dadaalka ay ku bixisay arrintan iyo sidii dhinacyada leysugu soo dhaweyn lahaa.
”Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku faraxsan tahay dadaallada Amiirka dalka Kuwait Amiir Nawaaf Axmed iyo hoggaamintiisa wadahadallada lagu dhammeystirayo soo celinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo dad ee walaalaha ah iyo guud ahaan dalalka Khaliijka” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa markii uu soo baxay khilaafka wadamada Khaliijka ka qaadatay go’aan dhax dhaxaadnimo ah, inkastoo go’aankaasi loo arkayay mid u xaglinayay dhinaca wadanka Qatar oo wixii xiligaa ka danbeeyay uu aad u sii wanaagsanaaday xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ay ku yeelatay.